2018 phantse kwi ekupheleni, nto leyo ithetha ukuba iKrismesi ikufuphi! Abantu nangoku abangafumani ilungele kuyo, kodwa ngabahambi, lixesha eliphezulu ukucwangcisa i uhambo. Ukuba ukhangela le isixeko ilungelo ukuchitha leKrismesi, siyifumene wawuzegquma.
Eli nqaku liza kunika uluhlu oluneenkcukacha izixeko kakhulu ukuchitha leKrismesi. Yintoni egqithisile, siza kukuxelela ngazo zonke izinto ezinomdla onokuzenza apho, kodwa okubaluleke, indlela ukuya kwezi zixeko ngololiwe.
Ungatyelela Amsterdam ngololiwe ukusuka phantse naphi eYurophu. Isikhululo central lebhokisi Paris, Frankfurt, Brussels, London, Zurich, Berlin, Prague, kunye nezinye ezininzi. Kukho imigca rhoqo abaninzi kubo kunye nabanye abaninzi imizi e Netherlands. Ke ukuba ufuna ngoololiwe baseYurophu ungonwabela uninzi lweeDolophu eziGqibeleleyo zokuChitha iKrisimesi 1 uhambo.
Ngaphezu, kuya kufuneka ukubona Buda mihle Castle kunye nePalamente Building. Ke zona izinto onokuzenza ebusika, kukho ezininzi. Ukusuka zikhwele streetcars ukuba iZiko loFikelelo olwenziwe Lula kwi Budapest Park ice salo, zihlala zininzi izinto zokwenza apha. kwakhona, musa ukulibala ukutyelela imarike yeKrisimesi eVorosmarty Isikwere kunye nomboniso weKrisimesi kwi-Basilica.
Esinye sezizathu zokuba sikhethe i-geneva kwezona zixeko ziGqibeleleyo zokuchitha ibhlog yeKrisimesi kukuba abathandi bokutya kufuneka bavuye njengesixeko sangaphambi-market Christmas inikeza ukutya kulo lonke ihlabathi. Yintoni egqithisile, ungakwazi ukuya kuthenga Ukuhamba e Street, yaye emva koko sityelele ezinye amahlandinyuka eziphawuleka kakhulu. ezi zibandakanya i Palace weZizwe eziManyeneyo, St Pierre Cathedral, Jet Water, kunye nokuninzi.
#Hangari #traveleurope europetravel Swiden amacebiso trainjourney Tranride oololiwe traintip tips uloliwe train Travel tips zokuhamba train uhambo ngololiwe Travel travelamsterdam travelfrance indawo yokuhamba